Akụkọ - Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.
Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd. a raara nye nnyocha, mmepe, mmepụta na ahịa nke YSC ika ulo oru akpaaka oru ngo na afọ. Na mgbe nile mgba site anyị ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, YSC ngwaahịa na-eresị n'ụwa nile. Na ya pụtara ìhè àgwà, dechara ọrụ na kasị asọmpi price, ọ na-otu n'ime ndị kasị pụrụ ịtụkwasị obi ụdị na ulo oru akara ụlọ ọrụ na China. Site na mmekorita oru ogologo oge na ụlọ ọrụ Europe, Japanese na South Korea, ọ na-eme ka usoro ngwaahịa ya bawanye ma gbasaa na valvụ na-ejide onwe ya na akụrụngwa pụrụ iche site na ngwaahịa hydraulic pneumatic. Companylọ ọrụ anyị eguzobewo usoro nlezianya njiri mara iji hụ na ngwaahịa YSC dị mma ruru n'etiti ndị ọgbọ ya n'ụwa niile.
Kemgbe ntọala ya, YSC, dịka ama ama ama ama na ụlọ ọrụ ikuku hydraulic, na-arụsi ọrụ ike na usoro mmepụta ihe nke China. Ọ na-agbaso usoro QSPT (mma, ọrụ, ọnụahịa, oge) ụkpụrụ njikwa azụmaahịa ma jiri nwayọọ nwayọọ na-bawanye, na-agbanwe ma mezue usoro ngwaahịa ya na-esote azụmaahịa ụlọ chọrọ yana mkpa maka mmepe mmepe nke ngwa ọrụ mmepụta ihe na China iji nye ndị ọrụ na-akwado ya ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere nkwakọ ngwaahịa, mbipụta akwụkwọ, eletrọniki, ngwa eletriki, ụgbọ ala, igwe, akụrụngwa, ịgbado ọkụ, njikwa dijitalụ, mmanụ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ kemịkal na China niile. Maka oge ahụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ama ama na China guzobere anyị ogologo oge na mmekọrịta siri ike.
Dika usoro ulo oru mmeputa ulo oru na China siri ike, a na-ebuli nsogbu ohuru maka igwe ulo na ulo oru akpaaka. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-enyekwa ohere maka mmepe anyị. Na nkera nke abụọ nke afọ 2006, anyị na-ntinye na ike YSC China Manufacturing Base na ibido melite mmepe otu. N'ọha mmadụ nke oge a mgbe emepụtara imepụta ihe eji nwayọ nwayọ, ngwaahịa YSC bụ isi na-ejikwa asọmpi ọnụahịa na mgbakwasị ụkwụ na ejiri nkwa. Maka oge a, usoro maka mmepe na mmepụta na-arị elu. Ewezuga ihe na-enye afọ ojuju maka iwu ụlọ, ụfọdụ na-eri na South Korea na mba ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike gasịrị, ọ nwetara nkwupụta ahịa n'otu oge ọzọ. Yabụ, akara YSC abụghị naanị nhọrọ kachasị mma gị kamakwa ọrụ dị ka nkwa maka ihe ịga nke ọma gị. Daysbọchị na-abịa, anyị ga-aga n'ihu na-agbaso ụkpụrụ na ịkpa oke n'agbanyeghị uru bara ụba na enweghị ụzọ ojiji iji nweta uru. Anyị ga-n'ụzọ zuru ezu raara na mmepe nke ígwè na akpaaka na China.
Anyị ga-achọ isonyere gị aka na ịmekọrịta ọdịnihu dị mma nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ.